Chee echiche ma baa ọgaranya - Napoleon Hill (PDF) - AFRIKHEPRI
Chegharịa ma baa ọgaranya - Napoleon Hill (PDF)
Obodo nke 100 obodo ndi obodo Europe bibiri: Ihe mere na enweghi ihe omuma ihe omuma na Afrika
Ibuo ederede ndi ozo
Zipu edemede gi na saiti
Na-ele nsonaazụ niile
n’ehihie, ka abali ise n’afọ 26
AHUIKE NA MEDICINE
AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ
ỊDỤTA NA ỊDỤTA
Nwee obi ụtọ
gburugburu ebe obibi
PDF Akwụkwọ edemede
AKWỤKWỌ Ị GA-EFE
Ụlọ ọrụ AFRICAN
Welcome Akwụkwọ PDF
Pa Afrikhepri Foundation
2 min gụọ
Vị nwere gị n’aka otu akwụkwọ kachasị ike n’ụwa. Akwụkwọ a na-ekpughere atụmatụ nke ndị mere akụ na ụba sochiri. Gị onwe gị kwa ga-eso ya, na-amụta site na peeji ruo na peeji nke otu esi etinye ya n'ọrụ ozugbo. Kedu ihe na-eme ka nwoke nwee ike inwe ọganihu na ndụ na ndụ, ịkpata ego, ịba ụba ngwongwo, inwe ọ happyụ mgbe onye ọzọ enweghị ike ịmalite? Gịnị na-enye mmadụ ohere inwe nnukwu ike nke onwe ya, ebe onye ọzọ na-enweghị ike ọbụla? Kedu ihe na-enye mmadụ ohere idozi nsogbu ya ma na-achọta ya oge niile, n'agbanyeghị ihe mgbochi nke ndụ, okporo ụzọ nke na-eduga na mmezu nke nrọ ya, ebe nke ọzọ na-agbasi mbọ ike, na-adaghị. ọ dịghị?
Ọtụtụ afọ gara aga, Andrew Carnegie, mgbe ahụ ọ bụ otu n'ime ndị kasị baa ọgaranya n'ụwa, malitere Napoleon Hill n'ime nnukwu nzuzo. Ọ gwara ya ọ bụghị naanị ka ọ chọpụta etu ndị ji ya eme ihe si nwee ihe ịga nke ọma, kamakwa ịmụ ụzọ ha na-eme ma chịkọta ha ọnụ iji nye ụwa. Ọ ga-abụ atụmatụ.
Na-atụgharị uche ma baa ọgaranya na-ekpughe nzuzo a ma na-enye gị atụmatụ a. Edere akwụkwọ ahụ na 1937 ma kemgbe ahụ ebipụtala mbipụta 42. Onye a, emelitere, nwere otutu ihe ohuru kwesiri inye aka ighota oru, tinyere ihe nkenke nke di nkenke nke kwuru. Will ga-amata otu ụzọ nwere ike isi merie ihe mgbochi niile, mejuo ebumnuche ọ bụla ma bụrụ isi iyi nke ịga nke ọma.
Akwụkwọ a nwere ike ịgbanwe ndụ gị. N’oge na-adịghị anya ị ga-amata ihe kpatara na etu ụfọdụ ndị siri baa ọgaranya n’ihi na ị ga-abụ otu n’ime ha.
Chee echiche ma baa ọgaranya - tulee ma too ọgaranya
4,99€ dị na ngwaahịa
1 ọhụrụ site na 4,99 €
Zụta ebe a
dị ka Mee 26, 2020 9:06
Bụ Ngwaahịa Okenye
Ụbọchị mwepụta 2012-06-04T00:00:00.000Z
Publication Ụbọchị 2012-06-04T00:00:00.000Z
Nọgide na-agụ isiokwu ahụ
Idenye aha na mmelite anyị
Thezọ Zuru Oke ma ọ bụ Esoteric Christ (PDF)
Akwụkwọ edemede na ntụgharị uche nke mgbaasị - Alice Bailey (PDF)
I nwere ike inwe mmasi
Na -aga Nsogbu - Eckhart Tollé (Audio)
Daalụ maka banye isonyere na mkparịta ụka ahụ
Chọọ ma zụta ngwaahịa
Ahịa kachasị mma: Ndị na-enye ikike ijide!
Soundjata, ma ọ bụ, L'épopée mandingue / Djibril Tamsir Niane
N'okpuru ọkụ, ọnwụ dị ka hypothesis na-arụ ọrụ
Okwu banyere colonialism, ndị na-esote: Nkwupụta na Negritude
Nkọwa nke lithotherapy - Njirimara ike nke okwute na kristal
Ihe odide nke Marie Madeleine - Chemistry nke Horus na anwansi nke Isis
ABC nke amamihe
Ndị ọbịa anyị
Copyright © 2020 Afrikhepri
Banye na akaụntụ gị n’okpuru
Mepụta Akaụntụ Ọhụrụ!
Mejupụta fọm ibe iji debanye aha gị
A chọrọ mpaghara niile. Banye
Weghachite paswọọdụ gị
Tinye egwu ọhụụ
- Họrọ Nzipụta -PublicPrivate
Saịtị a na-eji kuki. Site n'ịnọgide na-agagharị, ị na-anabata nkwụnye nke kuki ndị ọzọ. Chọpụta ihe kuki Policy.
Zigara ya enyi